Kedu esi emepụta backlinks n'ụzọ kacha mma?
Dị ka omume na-egosi, ọtụtụ ndị ọkachamara SEO na mmalite ntanetị na-etinye mgbalị nile ha n'inweta ezigbo backlinks. Ajụjụ a bụ ihe mere ha ji elekwasị anya na njikọ njikọ karịa usoro ndị ọzọ kachasị mma? Maka m ka ọkachamara SEO nwere ahụmahụ, azịza ya doro anya. Onye ọ bụla chọrọ ịmalite ọkwa ha na nchịkọta asọmpi, ọ dị mkpa ka ịmepụta profaịlụ njikọ dị ike. Ma ọ bụghị ya, enweghị isi na ịmepụta azụmahịa na netwọk n'ihi na ndị ahịa gị nwere ike agaghị anabata ọrụ gị.
Otú o sina dị, ọ bara uru ikwu na ọ bụghị ihe nkwado niile ka e kere. Enwere otutu ndi oji "ndi okachamara" ndi choro ighota ugbua egwuregwu ma weputa ihe choro maka nti - software advanced. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kpachara anya mgbe ị na-achọ ohere ụlọ njikọ maka saịtị gị. Ikwesiri izere ugbochi njikọ, ihe ntinye aka na ihe ndi ozo nke na - emeputa njikọ ndi ozo na akpaaka. Ọ bụ Google nwere ike ịchọta usoro ụlọ ọrụ ụgha ndị a. N'okwu a, saịtị gị ga-enweta ikikere kama ịme ihe ọṅụṅụ.
Ajụjụ mbụ nke na-abịa na ọkachamara SEO bụ "Olee ụzọ kachasị mma isi mepụta mma na azụ azụ azụ?" More iji zaa azịza nke ajụjụ a ka siri ike ịchọta maka ndị webmasters nwere ahụmahụ.
Ọ bụrụ na ị google ya, ị ga-ahụ ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọtụtụ n'ime ha enweghị otu uru ọ dị tupu. Enwere ike ịkọwa ya site ngbanwe ọ bụla na ahịa dijitalụ nke na-eduga n'ụzọ ọhụrụ na ụzọ dị irè iji nweta backlinks.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle nanị ụzọ kachasị mma na ụzọ ọhụrụ ị ga - esi mepee backlinks dị mma. Usoro njikọ ụlọ a ga-anọgide na-adị na afọ na-esote. Ya mere, ka anyị tụlee ụzọ eji arụ ọrụ ugbu a.
Ụzọ kachasị mma iji mepụta backlinks
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị ọrụ nlebara anya na otuto. A na-ekekọrịta ya site na Ịntanetị n'ihi ogo ya na uru ya. Na ụzọ kachasị mfe na ụzọ kasị mma isi mepụta organic backlinks bụ ọrụ ịme ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị nke na ndị mmadụ na-enwe mmasị dị ukwuu na ha tweet, dịka, blog, na ikwu okwu ị nwere ike ịkwado elu na nsonaazụ ọchụchọ site na ọtụtụ mkpado echekwara. Jiri njikọ njikọ ma mepụta ọdịnaya gị na ndị na-echebara gị anya. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya na mgbe niile, ndị na-eso ụzọ gị na ndị ọhụrụ ga-agbanwe ghọọ ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ, na-eme ka akara gị na-ewu ewu na niche gị.
Nrube isi ederede
Ekwerela na ndị na-ekwu na ahịa ahịa anwụọla. N'ezie, ọ ka na-arụ ọrụ kacha mma maka azụmahịa gị. Ahịa nke ahịa bụ otu n'ime usoro ntanetị ndị kasị dị irè nke ndị ahịa na SEO ọkachamara na-eme n'ụbọchị ndị a.
Akụkụ dị oke egwu nke ịzụ ahịa isiokwu bụ olu. Ị ga-enwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke isiokwu, iji nweta pasent dị elu nke backlinks. I kwesiri ịdị njikere na ị na-edozi ọtụtụ isiokwu agaghị ebuli ọkwa gị elu karịa abalị. Ịkwesịrị ịme ọtụtụ nzaghachi na mgbe niile iji nweta ihe a chọrọ.
Iji mee ka usoro nrubeisi dị mfe, ịnwere ike iji ngwanrọ ịntanetị nwere ike ime ya na akpaghị aka. Dịka ọmụmaatụ, Robot Marketing Robot ga-eme ihe niile maka gị n'ụzọ kacha mma. Ihe niile ị chọrọ bụ ịtinye ozi gị na ya ma kwe ka ọ na-agba ọsọ.